China Laser welding milina mpanamboatra tanana sy mpamatsy |UNIONLASER
Hery Avo voahidy
Laser welding milina
milina fanapahana plasma
Valio ny fanontanianao
Fibre tamin'ny laser fanapahana milina
Fibre laser welding milina
Fibre tamin'ny laser fanadiovana milina
UL-3015 Raycus Ipg 500w 1000w Fibre Laser Cutting Ma...
Laser welding milina tanana
Robot fibre laser fanapahana milina
High precision fibre tamin'ny laser fanapahana milina
12000w 20000w fibre laser fanapahana milina
CNC fantsona sy takelaka Laser Cutting Machine
CNC Pipe Laser Cutting Machine miaraka amin'ny loharano Laser Fibre
metaly fibre tamin'ny laser fanapahana milina
Karazana: Fibre laser welding milina
antoka:3taona ho an'ny milina
Fahaizana famatsiana: 50 sets/mois
24h an-tserasera ho an'ny varotra mialoha sy aorian'ny fivarotana
Ny fitsipiky ny welding
Ny welding laser dia mampiasa pulses laser mahery vaika mba hanafanana ny fitaovana ao amin'ny faritra kely.Ny angovon'ny taratra laser dia miparitaka ao anaty fitaovana amin'ny alàlan'ny fampitaovana hafanana, ary miempo ny akora mba hamorona dobo miendrika manokana.
Corner nozzles, endrika U (fohy), endrika U, famahanana tariby 1.0, tariby famahanana 1.2 Famahanana tariby 1.6
Wire feeding nozzle 1.0: fampiasana ankapobeny amin'ny famahanana tariby 1.0;
entona miendrika U (fohy): ampiasaina amin'ny lasantsy zaitra sy lasantsy fillet tsara;
Wire feeding nozzle 1.2: ho an'ny famahanana tariby 1.2 ho an'ny fampiasana ankapobeny;
Nozzle entona miendrika U (lava): ampiasaina amin'ny fanaovana lasantsy sy fillet tsara;
Wire feeding nozzle 1.6: fampiasana ankapobeny amin'ny famahanana tariby 1.6;
Angle rivotra nozzle: ampiasaina ho an'ny vehivavy fillet welding;
Fitaovana famahanana tariby mpamily roa
Ny ampahany lehibe
Qilin Welding loha.
- Maivana sy malefaka, ny famolavolana gripa dia ergonomic.
- Mora soloina ny family fiarovana.
- Lens optika avo lenta, afaka mitondra hery 2000W.
- Ny famolavolana rafitra fampangatsiahana siantifika dia afaka mifehy tsara ny mari-pana miasa amin'ny vokatra.
- Famehezana tsara, afaka manatsara ny fiainan'ny vokatra.
Welding dikan-fibre mitohy tamin'ny laser RFL-C2000H
Izy io dia manana fahaiza-manao fiovam-po amin'ny photoelectric avo kokoa, tsara kokoa sy maharitra kokoa ny kalitaon'ny taratra, ary matanjaka kokoa ny fahaiza-manaon'ny fisaintsainana.Amin'izay fotoana izay ihany koa, dia manolotra rafitra fibre optika fibre Optical taranaka faharoa, izay manana tombony miharihary amin'ny laser hafa mitovy karazana eny an-tsena.
Endri-javatra amin'ny laser welding
1. Ny hafainganam-pandehan'ny welding dia haingana, 2-10 heny haingana kokoa noho ny welding nentim-paharazana, ary ny milina iray dia afaka mamonjy welders farafahakeliny 2 isan-taona.
2. Ny fomba fiasan'ny lohan'ny basy vita amin'ny tanana dia mamela ny workpiece ho welded amin'ny toerana rehetra sy amin'ny zoro rehetra.
3. Tsy mila latabatra welding, dian-tongotra kely, vokatra lasantsy isan-karazany, ary endrika vokatra azo esorina.
4. Ny vidiny welding ambany, ny angovo ambany ary ny vidin'ny fikojakojana ambany.
5. Tsara tarehy welding seam: ny welding seam dia malama sy tsara tarehy tsy welding scars, ny workpiece dia tsy deformed, ary ny welding dia mafy, izay mampihena ny fanaraha-maso ny fitotoana dingana sy mamonjy ny fotoana sy ny vidiny.
6. Tsy misy consumables: tamin'ny laser welding tsy misy welding tariby, kely consumables, ela velona, ​​azo antoka kokoa sy ny tontolo iainana.
Tombontsoa amin'ny laser welding
1. Ny welding seam dia malama sy tsara tarehy, tsy misy welding scars, tsy deformation ny workpiece, mafy welding, mampihena ny manaraka polishing dingana, mamonjy ny fotoana sy ny vidiny, ary tsy misy welding seam deformation.
2. Fampandehanana tsotra,
Ny fampiofanana tsotra dia azo ampiasaina, ary ny vokatra tsara tarehy dia azo welded tsy misy tompony.
Raha oharina amin'ny welding nentim-paharazana
Tena avo kaloria
Somary na tsy misy deformation
Toerana welding lehibe
Fine welding toerana, toerana azo ahitsy
Tsy tsara tarehy, lafo vidy amin'ny polishing
Malambo sy tsara tarehy, tsy misy fitsaboana na vidiny ambany
Tsy mety amin'ny perforation, angovo azo fehezina
Fanodinana mazava tsara
Lany fotoana fohy 1:5
Ny fiarovana ny mpandraharaha aloha
Taratra ultraviolet mahery, taratra
Saika tsy mampidi-doza ny fiposahan'ny hazavana
Anaran'ny fitaovana Fibre laser welding milina
Laser hery 1000W / 1500W/2000W
Laser halavan'ny onjam 1080NW
Laser pulse matetika 1-20Hz
Pulse sakany 0.1-20ms
Haben'ny toerana 0.2-3.0mm
Dobo lasantsy kely indrindra 0.1mm
halavan'ny fibre Ny 10M mahazatra dia manohana hatramin'ny 15M
Fomba fiasa Mitohy/Fanitsiana
Fotoana fiasana tsy tapaka 24 ora
Ny hafainganam-pandehan'ny welding 0-120mm/s
Masinina rano mangatsiaka Indostrialy mari-pana tsy tapaka tanky rano
Ny mari-pana amin'ny tontolo iasana 15-35 ℃
Ny haavon'ny hamandoana ny tontolo iainana miasa <70% tsy misy condensation
Recommended welding hatevin'ny 0.5-0.3mm
Fepetra hantsana welding ≤0.5mm
Volavola miasa AV380V
lanja 200 kg
Mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra ekena iraisam-pirenena sy ny fenitra ekena ho an'ny orinasa.Ny orinasa dia nametraka fenitra amin'ny antsipiriany momba ny tontolo iasana sy ny fepetran'ny asa amin'ny fizotran'ny famokarana, ny fepetra ara-teknika fototra, ny fitakiana mangatsiaka, ny fiarovana amin'ny taratra laser, ny fiarovana elektrika, ny fomba fitsapana, ny fisafoana sy ny fanekena, ary ny fonosana sy ny fitaterana.
Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001 izahay ary nanangana rafitra fiantohana kalitao ho an'ny famolavolana, famokarana ary serivisy fitaovana fanodinana laser kely sy antonony.
Aorian'ny sonia ny fifanarahana, ny Antoko B dia hamolavola sy manamboatra fitaovana mifanaraka tsara amin'ny tondro ara-teknika fifanarahana.Aorian'ny fanamboarana ny fitaovana, ny Antoko A dia tokony hanaiky mialoha ny fitaovana araka ny tondro ara-teknika amin'ny toerana misy ny Antoko B.Aorian'ny fametrahana sy fametahana ny fitaovana ny antoko A, ny roa tonta dia mamaritra ny fahafaha-manao, ny fahamarinan-toerana ary ny fahamendrehan'ny Antoko A. Araka ny fitaovana mahazatra alohan'ny fanekena.
Aorian'ny sonia ny fifanarahana, ny antoko B dia mamolavola sy manamboatra ny fitaovana mifanaraka amin'ny tondro ara-teknika amin'ny fifanarahana.Aorian'ny famokarana sy fanamboarana ny fitaovana, ny antoko A dia hanaiky mialoha ny fitaovana amin'ny toerana misy ny Antoko B araka ny tondro ara-teknika isan-karazany.Ny fitaovana dia apetraka sy debug avy amin'ny Antoko A. Ny fenitra dia mitarika ny fanekena farany ny fahafahan'ny fitaovana, ny fahamarinan-toerana ary ny fahamendrehana.
Misy ny torolalana momba ny fametrahana, ny fikojakojana, ny fampidinana entana, ny fanofanana, sns.
Ny fitaovana iray manontolo (afa-tsy ny ampahany marefo sy ny kojakoja ilaina toy ny fibre conductive sy lens, ny loza voajanahary tsy mahatohitra, ny ady, ny asa tsy ara-dalàna, ary ny sabotage nataon'olombelona) dia manana fe-potoana fiantohana herintaona, ary ny fe-potoana fiantohana dia manomboka amin'ny daty. ny fandraisana ny orinasanao.Fakan-kevitra ara-teknika maimaim-poana, fanavaozana rindrambaiko ary serivisy hafa.Manome tolotra fanohanana ara-teknika amin'ny fotoana rehetra hiatrehana ny tsy fahatomombanan'ny milina.
Manome tolotra fanohanana ara-teknika izahay amin'ny fotoana rehetra.Antoko B dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny Antoko A miaraka amin'ny kojakoja ilaina mandritra ny fotoana maharitra.
Fotoana famaliana serivisy aorian'ny varotra: 0.5 ora, rehefa avy nahazo ny antso fanamboarana ny mpampiasa, ny injeniera aorian'ny varotra dia hanana valiny mazava ao anatin'ny 24 ora na tonga any amin'ny tranokalan'ny fitaovana.
Fenitra fampiharana ny entana
Ny famokarana, ny fisafoana ary ny vokatra eken'ny orinasa dia mampihatra ny fenitry ny orinasa.Ny fenitra nasionaly notononin'ny fenitry ny orinasa dia:
GB10320 Fiarovana elektrika amin'ny fitaovana sy fitaovana laser
GB7247 fiarovana amin'ny taratra, fanasokajiana fitaovana, fepetra takiana ary torolàlana ho an'ny vokatra laser
GB2421 Fomba fitsapana ara-tontolo iainana fototra ho an'ny vokatra elektronika
GB/TB360 Famaritana ho an'ny herinaratra laser sy fitaovana fitiliana angovo
GB/T13740 Laser taratra divergence zoro fomba fitsapana
GB/T13741 Laser taratra taratra savaivony fomba fitsapana
GB/T15490 General Specification ho an'ny Solid State Lasers
GB / T13862-92 fomba fitsapana herin'ny taratra laser
GB2828-2829-87 Fanaraha-maso ara-potoana isam-bolana amin'ny alàlan'ny fomba fanaovana santionany sy latabatra fanaovana santionany
Fiantohana ny kalitao sy ny fepetra fanaterana
A. fepetra momba ny fiantohana ny kalitao
Ny orinasa dia mitantana hentitra mifanaraka amin'ny rafitra kalitao ISO9001 ekena iraisam-pirenena.Mba hiantohana tsara ny kalitaon'ny vokatra sy hisorohana ny vokatra tsy manara-penitra tsy hirotsaka amin'ny dingana manaraka, manomboka amin'ny fitahirizana akora voalohany ka hatramin'ny fanaterana, dia tsy maintsy mandalo ny fisafoana fividianana, ny fanaraha-maso ny dingana ary ny fisafoana farany.Ny fizotran'ny famokarana dia fehezina tsara mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny fanaraha-maso mahomby ny kalitaon'ny vokatra ary hahazoana antoka fa ny vokatra amboarina rehetra dia vokatra mahafeno fepetra.
B. Fepetra hiantohana ny fotoana fanaterana
Ny orinasanay dia nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001.Ny famokarana sy ny fandidiana dia mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra kalitao ISO9001.Ny dingana manontolo manomboka amin'ny sonia ny fifanarahana ka hatramin'ny fanaterana ny mpanjifa dia voafehy tanteraka.Tsy maintsy jerena ny fifanarahana rehetra.Noho izany, ny rafitra dia afaka miantoka ny mpamatsy Manatitra vokatra ara-potoana, miaraka amin'ny kalitao sy ny habetsahana.
Fonosana sy fitaterana: Tsotra ho an'ny fitaterana an-tanety ny fonosana vokatra.Ny fonosana vokatra dia mahafeno ny fepetra takian'ny fenitry ny firenena, ny indostria ary ny orinasa mifandraika amin'izany, ary mandray fepetra manohitra ny harafesina, ny harafesina, ny orana ary ny fifandonana mba hahazoana antoka fa tsy simba ny vokatra mandritra ny fitaterana.Ny fonosana dia tsy recycle.
teo aloha: Fampidirana vokatra fanadiovana laser tanana
Manaraka: Fibre Laser Cutter Miaraka amin'ny Raycus 1000W
Portable Fibre Laser Welder
Mahazoa fanavaozana mailaka
Adiresy: No. 59, Gongye South Road, Jinan Area, Shandong Pilot Free Trade Zone, Shina
Telefaonina: +86 (531) 5558 1022
Momba ny UL Fiber laser plate cutting machine
Hevitra mpanjifa.2 andiany UL-3015F mandefa...
12,000 watt laser dia manampy amin'ny fampandrosoana ny ...
Fibre tamin'ny laser fanapahana milina fampiharana-a ...
TOP 5 UnionLaser Solution fibre lasers ho ...